Iingcamango ze-Optical kunye namanani angenakwenzeka - Paradoxa imidwebo
Into ehamba apho?
Uluhlu oluthe xaxa
Imibala yokubala ikhefu elihle lezingane zonke ubudala. Kwiwebhsayithi yethu uza kufumana iinjongo ezininzi ezahlukahlukeneyo kwizihloko ezihlukeneyo: Imidwebo yeengcamango ezibonakalayo kunye namanani angenakwenzeka, okubizwa ngokuba yi-paradoxes, inomdla ngamnye umntwana.
Iingcamango ze-Optical kunye namanani angenakwenzeka
Iingcamango zomsebenzi - iingcinga
Iingcamango ze-Optical zibhekisela kuzo zonke iinkalo zobuntu bobuxoki njengento ehlangeneyo.
Oku kunokwenzeka, ngakwesinye icala, xa sibona izinto ngokwahlukileyo kwizinto ezikuyo ngendlela ethile yokumela.
Nabanye abantu abahlukileyo kwi-template efanayo bayazibona ezinye izinto okanye nje izinto zitsalwa ngendlela abangenakuze zenzeke kwiimeko eziqhelekileyo kwaye ingqondo yethu ididekile.
Zijabulise kunye nemibono yethu yokukhanya. Cofa kwikhonkco ukuya kwiphepha le template ehambelanayo:
Nguwuphi umgca ubude?
Liliphi inani elide kunabanye?
Sisiphi isangqa esikhulu
Ukufana okanye ukuguquka?
Ukufana okanye ukungalunganga
Ukufana okanye akunjalo?
Ucofa kwikhonkco utshintsho kwiphepha nge template ehambelanayo:
Ubuso okanye isitya
Imivalo emithathu okanye emine?
Ukungaqondi kakuhle - uyibona ntoni?
Kwimifanekiso engezantsi, kubonakala ngathi kukho into ehambayo, jonga ngokukhawuleza! Cofa kwiifoto ukwandisa imifanekiso:
Le mibuthano iyahamba .... hayi
Ukuba umntu ubheka lo mfanekiso ngendlela egxininisiweyo, umbono womntu uzuza ingcamango yokuhamba kweetyhula. Kakade, akukho nto ihamba kule mifanekiso!
Kwakhona, ubuchopho bethu bukhohlisayo ekusebenzisaneni kwamehlo ethu: i-illusion illusion iqukumbela ngeso lengcinga.
Kanisza Square - Ukubona into engekho
Nangona sikholwa ukuba kucacile ngamehlo ethu: akukho sikwere phakathi, iingcamango zethu zobuchopho umfanekiso ojongene neepateni eziqhelekileyo. Le nto iyaziwa ngokuba yi "Kanisza Square".
Ngaba konke okungahambi kakuhle?
Ngokwenene? Yikholwa okanye akunjalo, imigca yesiphambano iyafana. Unokulinganisela oku okanye, ngokugxila kwimigca emibini eyahlukileyo, uyabona ukuba yonke imigca ifana.
Ukungaqondakali kwabantu abadala
Abantwana babona into eyahlukileyo kunabantu abaninzi abadala ...
Umntu ongenakwenzeka - unxantathu
Isalathisi esingenakwenzeka - isangqa
Imilinganiselo engenakwenzeka - izitebhisi